बेलायती सेना हुँदै कुशल राजनीतिज्ञ अनि सफल व्यवसायीसम्म– चन्द्र खापुङ्हाङ - Samadarshi Sanchar
बेलायती सेना हुँदै कुशल राजनीतिज्ञ अनि सफल व्यवसायीसम्म– चन्द्र खापुङ्हाङ
, शनिबार, १३ भदौ, २०७७, बिहानको ०७:०७ बजे
तेह्रथुम जिल्ला मोराहाङ् २ हाल मेन्छायेम गाउँपालिका वडा नं. ५ मा पिता भारतप्रसाद र आमा नन्दमाया पन्धाक (खापुङ्)को कोखबाट वि.सं. २००७ साल कार्तिक १३ गतेका दिन जन्मनु भई कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दागर्दै लामो समय बेलायती सेनामा कार्य गरी जिवनयापनको क्रममा धरान उप–महानगरपालिका वडा नं. १५ मा स्थायी बसोबास गर्नुहुने हाल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्र खापुङहाङ्सँगको भलाकुसारीः
चन्द्र खापुङहाङ् (उपाध्यक्ष)
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल
तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई दिनु हुन्छ कि ?
मेरो ३ छोरा र १ छोरी छन् । श्रीमती चाहि यो संसारबाट विदा लिईसकेका हुन् ।
तपाई कति सालमा बेलायत सेनामा प्रवेश गर्नु भयो ? कति सालमा अवकाश हुनु भयो ?
म २०३० सालमा बेलायत सेनामा भर्ती भई २०४८ सालमा अवकास भएको हुँ ।
कतिसाल तिरबाट राजनीति शुरु गर्नुभयो ? कुन पार्टीबाट राजनीति शुरु गर्नु भयो त ?
बेलायती सेनामा १८ बर्ष नोकरी गरि अवकास भएपछि अहिले धरानलाई कर्म थलो बनाईयो । साथै २०४८ सालबाट राजनीति यात्रा प्रारम्भ गरेको हो । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाटै राजनीति शुरु गरेको हो ।
जनमुक्ति पार्टीमा कुन कुन पदमा रहेर काम गर्नु भएको थियो ?
मैले जनमुक्ति पार्टीको वार्ड, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्मको पदमा रहेर २८ बर्षसम्म काम गरियो ।
जनमुक्ति पार्टी परित्याग गर्नुको औचित्य नि ?
पार्टीमा एक अर्का विच आपसी मनमुटाव हुन थालेपछि पार्टी दिनानुदिन कम्जोर हुँदै गएको तर नेतृत्व पक्ष कहिल्यै त्यसप्रति उद्धार नभएपछि पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय गरियो । नेतृत्वसँग विचार एउटै भएपनि भावना नमिलेर नै छोडियो ।
ठूल–ठूला दलहरु छन् तर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल मै किन प्रवेश गर्नु भयो ?
ठूला दलहरु भनेको नेपालमा न विचार छ, न सिद्धान्त छ, खाली त्यहाँ स्वार्थमात्रै छ । हामी जस्तो जातीय पहिचान र अस्तित्व बोकेका व्यक्तिहरु त्यहाँ अटाउन सिकन्न बरु आफ्नो पहिचान अस्तित्व नै मिल्ने दल भनेकै अहिलेको समय सापेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च भएकोले यो पार्टी मै आफ्नो अस्तित्व कायम होला भन्ने लागेर प्रवेश गरियो । अबको आन्दोलन पहिचान र अस्तित्वको निमित्त नै हुने भएकोले आफूले लामो राजनीति यही मुद्दाको लागि गरेको हुँदा यो पार्टी रोजियो ।
लिम्बुवान राजनीतिमा आउँदा आफूलाई कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ त ?
जनमुक्ति पार्टीमा २८ बर्ष लामो समय विताईयो। त्यहाँ पनि संघात्मक शासन र पहिचानको विषयमै राजनैतिक वकालत गरियो । अब मञ्चले उठाएको मुद्दा पनि यहि हो हिजो भन्दा आज अलिकति फरक ढंगले कुरा उठाएपनि मञ्च र लिम्बुवानको विचार र सिद्धान्त नै उचित लाग्यो र यहि पार्टीमा प्रवेश गरेर यहिबाट अरु राजनैतिक समय विताउने निर्णय गरेको छु ।
अब, यस संघीय मञ्च तथा लिम्बुवान मञ्चमा तपाईको भूमिका के रहने छ र तपाईको आगामी पार्टीलाई कस्तो योगदान रहने छ त ?
यो पार्टीले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ पुरा गर्नेछु । पार्टीलाई नैतिक, भौतिक र आर्थिक रुपमा के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने त्यो सबै गर्ने प्रण गरेको छु ।
लिम्बुवान मञ्चले चार बर्षे कार्य योजना ल्याउँदै छ, त्यसमा तपाईको विचार कस्तो रहेको छ अलिकति प्रष्ट पारिदिनु भए हुन्थ्यो कि ?
यो पार्टी पूर्वमा अति सक्रिय पार्टीको रुपमा विकसित भईरहेको छ । यो मञ्चले हालैमात्र ४ बर्षे कार्ययोजना पारित गरेको छ । यो अत्यन्तै समयसापेक्ष आएको छ, यो कार्य योजना पुरा गरेमा लिम्बुवान मञ्च र संघीय मञ्चले देशमा नयाँ उच्चाई लिनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको हुँदा यो कार्ययोजना लागू गर्न तमाम लिम्बुवानवासीमा म अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
संघीयवादी र संघीय विरोधी शक्ति बिच अहिले ठूलो खाडल देखिन्छ त्यसमा तपाईको धारण प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
सांघीयवादी र संघीय विरोधी विच ठूलो खाडल छ । यो विभेदको अन्त्य गरिनु पर्दछ । देशमा दुई लाईन बनेको देखिन्छ । संघीय पहिचानवादी र संघीय विरोधी शक्तिहरु जबसम्म सबै जाती, वर्गहरु विच समानताको आँखाले हेर्न सकिन्दैन यो भई नै रहन्छ तर आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सबै एक हुनु जरुरी छ ।
पहिचानवादी दलहरुलाई जातीय र क्षेत्रीय पार्टीको रुपमा हेरिन्छ, तपाईको यसमा के धारण छ ?
ठूला एकात्मकवादी दलहरुले साना दलहरुलाई हेर्ने आँखा सानै हुन्छ र नै पहिचानवादी दलहरुलाई सानो देख्छन् र जातीय पार्टी र क्षेत्रीय पार्टीको रुपमा हेर्ने गर्छन् यो कुरा हामीले चिरेर जानु पर्छ । हामीले जनताहरुलाई कन्भेन्स गरेर संघीय मञ्च राष्ट्रिय पार्टी र लिम्बुवान मञ्च प्रान्तीय पार्टी भनेर स्पष्ट पार्नु हाम्रो कर्तव्य हो । मञ्चको १०+१ प्रान्तको अवधारणलाई राष्ट्रिय रुपमा अगाडि बढाउन सक्रिय हुने सोच बनाएको छु ।
तपाई धरान सुनसरीमा एक सफल व्यवसायीको रुपमा चिनिनु हुन्छ ? तपाई व्यवसायमा कसरी सफल हुनु भयो ?
बेलायत सेनाबाट अवकास भएपछि धरानमा आएर बसियो । यहाँ बस्ने क्रममा व्यवसायमा हात हालियो । अहिले एउटा होटल, पानी फ्याक्ट्री, सुन पसल, गाई फर्म, सहकारी संस्था र आई.एम.ई. रेमिटेन्स संचालन गरिरहेको छु । अब व्यवसाय सफल हुनुमा परिवारले पनि राम्रै साथ दिएका छन् । साथीभाई इष्टमित्रको पनि हात छ ।
राजनीति र व्यवसायलाई सँगै डोरयाउदा तपाईलाई कस्तो अनुभूत हुन्छ ? चुनौतीहरु पनि छन् होला नी ?
अब राजनीति गर्नु त्यति सजिलो छैन, पैसाको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ, त्यसैले व्यवसायसँगै लाने सोच बनाएर अगाडि बढियो । चुनौती त छ नै, अब करोडौं पैसा लगानी भएपछि व्यावसाय ढुब्न पनि त सक्छ भन्ने हो तर सबैको साथ सहयोगले हालसम्म समय मिलाएर अगाडि बढिरहेको छु ।
देशको अवस्था अनुसार अगाडि बढ्नेछु, अब पुरानो पार्टीको साथीहरु नयाँमा आउन हिच्किचाउँछन् तर मेरो अनुरोध सबैलाई यस संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा लिम्बुवानमा आउन आग्रह गर्दछु । यो नै पहिचानवादीहरुको एक मात्र पार्टी हुन सक्छ । साथै साझा लिम्बुवान पत्रिकाले मलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै यस पत्रिका परिवारलाई धन्यवाद छ ।
(साझा लिम्बुवान मासिकबाट साभार)